Qormo:- Kowda Agoosto: Maalinta la qariyo ceebaha Puntland!. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaQormo:- Kowda Agoosto: Maalinta la qariyo ceebaha Puntland!.
July 30, 2019 marqaan Faalloyinka, Puntland, Soomaliya, Wararka maanta 11
Puntland oo 21 sano dhisneyd, waxay isu diyaarineysaa dabbaaldeg wax ka hooseeyaa aysan jirin. Ciidankii Daraawiishta, Booliska iyo Asluubta waxba kama hayaan. Shantii Gobol ee ku midoobay waxaa ka jooga labo Gobol iyo bar. Al-shabaab iyo Daacish ayaa canshuurta ka qaadda Ganacsatada Puntland. Dadkeeda tirakoob kuma aysan sameyn. Hal doorasho oo xataa Gole-deegaan ah ma qaban!. Musuqmaasuqu waa shib ka dheh!.
Shacabka mandaqada sool sanaag iyo cayn wax qiimo ah uguma fadhido xuskaaas 1da ogoosto waayo majirto puntland loo dhan yahay.
Haatan, diyaargarow wayn ayey ku jirtaa. Waxaaa funaannado iyo Diracyo baati ah loo wada gelliyey dhallinyaradii, meel kasta waxaa ka baxaya ” Ku dayo Puntland ku dayo”! Waa heeso Faroole maalgelliyey berigii uu xukunka joogay, isaga ayaaba Gaas ka fiicnaa maxaa yeellay Gaas wuxuu maallgelin jiray heeso isaga lagu ammaanayo!.
Dhanka kale, Kowda Agoos waxay Puntland uga dhigan tahay maalin Hawiyaha loogu faano, isaaqana loogu hanjabo, Dhulbahanataha iyo Warsangeliga niyadda loogu dhiso ( Puntland waa dhisantahee ha ka taginna). Waxaa gaaddo-ka-cayaar sameyn doonna ciidanka PSF ee Maraykanku maalgelliyo iyo kuwa PMPF ee Imaaraatku maalgelliyo. Aaway ciidankii bulshadu lahayd ee Daraawiishta loo yaqiinnay? Mooji! Haddaa la abaabullayaa ayaan maqlayey!
1-da agoos, maalinta ceebaha Puntland la qariyo!.
Sannad guuro wanaagsan !
W/Q: Ali Ahmed Ali
Deni waxa ka goan inuu kashaqeeyo horumarka labada gobol iyo barka.
Oo ah budhlaynta xaqiiqda ah.
Maxamud saleban waxay quusten maalinki,igad iyo beeshi caalamka
Eey u caban jireen kuyirahdeen waar anagu cidii mesha haysata ayuun ban
U aqoonsanahay,markaa sool iyo sanag waa somaliland madama ay yadu xukunto.
Ku Doqonkaan xaaji saalax
War iimaankaaga xaasadkaa wase kala bax afkaaga jaahilkaa puntland
Xaako xaar baa lagu yiraa
Jaahil reer xaako kasoo jeedaa tahay
Nin goba kuma hadlo waxaad ku hadasho
Ku xaako xaaraan
Looma hadlo sidii carruur yaryaroo is caayaysa
DAdka soomaalidu waa qabiilooyin laakiin waxaa mideeya hal qabiil Oo ah qabiilka soomaali waa dadku sidaa fahmaan oo soomaali isnabad geliso ooy kala nabad galaan
Soomaali waa hal qabiil oo magacooda guud waa soomaali
Qof ama qabiilo waxaa lagu caayaa waa xumaanta,qaladka xasadka iyo dhagarta
Lagu sameeyo qof ama qabiilo ama waddan qof ama qabiilo la iskama caayo dalkii la aan
Qabiilada puntland waa dad goba oo walaaltinnimada soomaalinimadu ku weyntahay
Take it easy,xaa kudaaray dhiigkar baa kugu dhacay,kkkkkkkk
Maqaalka xaga sare kuqoran cinwankisa eeg,1 August wa malinta laqariyo ceebaha budhlayn,
Kaas un baan tixracaye mana soodanta keenay.kkkkkkkkkkkkkk
Mr alool kasaar dasturkaga sool iyo sanaag,hadii kale waa dastur jabin.
Hadaad iska dayso shegashada gobalada somaliland,balan waad naga nabad gali.
WARKU MAKU DHACAY MR ALOOLOW
Taa waxa kasii daran markay yiraahdeen XOOLAHII baan xayirnay oo markabkaas madagi karo…waa kuwii wasiirka xanaada xoolahaa Villa Wardhiigley u diray SUCUUDIGA.
Aayar uun baa lagu yidhi dee orod xafiis ka xanaanada xoolaha ee Villa Watdhiigley kasoo fur BERBERA si ay ugasoo qaataan waraaqdii caafimaadka!!
Deee adiguba caqlaad leedahee carar maxaa dhaamaa!!
Adiguba caqlad ledehe carar maxa dhama.
Waa sababta uu dhigkarku ugu dhacay
Ku mr xaako
Sool iyo sanaag iyagaa waxka dhistay puntland
Oo miyaadan ogayn inay mar yihiin puntlander marna khaatumoland marna marna maakhirland marna somalilander?!!!!!
Bal mr xaakoow eeg nimankaa tirabadnidooda!!!!
Puntland forever insha Allaah
1 August ka naxoow nafta waa nacabkoow
Dee aniga qudhaydu mar dds baan ahay,mar jabuuti baan ahey,
Mar somalilander ban ahey.kkkkkkk
Bal kawaran hee.
Mida kale budhlayn laba gobol iyo bar ah waan ladabaaldageynaa walee
Waa budhlaynta xaqiiqda ah.
Dee ddsna annagoo budhland ah waanu nahaye ka warran dee sookumaannaan harqin dee
Dhinac walbaannu kaa joognaa xitaa reer jabuuti waa reer abtigayo
Hayaaaay Allaahu Akbar
God bless somali weyn
No more queen Elsebeths slaves and beggers
Oo hadaa maxaad tukoraq uga carartay,kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Oh sorry waxan ilaabay faanku inuu meheradiinii ahaa.kkkkkkkkkkkkkkkk
War anagu mafaane ficilkanu naqana
Hadaad meesha naga saartid waan dhuumanayaa oo kula kaftami maayo
Lkn adigu indhoadaygaga waad soo taagan tahay.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk